Soo laba kacleynta Corona ee dalalka qaar oo jahwareer hor leh abuuray - BBC News Somali
Waxaa jira hadal hayn ah in cudurka covid19 uu ku soo rogaal celinaya dalal u haystay inay xakameeyeen. Arrintan ayay in badan ka digayeen seynisyahannada iyo Hay'adda Caafimaadka Addduunka ee WHO
Hirkan labaad ee cudurka coronavirus hadda ma ahan xilligi la dhihi lahaa "haddii", laakiin waa xilligi lagu baraarugi lahaa" ayuu yiri Dr Jennifer Rohn oo ku takhasuay cilmiga noolaha oo aad ula socoday sida uu Aasiya uu cudurka ugu faafay dunida kalana uu u gaaray.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHo waxay sheegtay inuu faayraskan cusub, xakameyntiisuna ay u baahan tahay "dadaal ballaadhan".
Wargeyska the Guardian wuxuu toddobaadkan qoray, kooxda jawaab ka bixinta Covid-19 ee Midowga Yurub waxay soo jeediyeen iney iisu diyaariyaan hirka labaad ee cudurka, "su'aashuna waxay tahay xilligee iyo intey le'eg tahay" ayuu yiri agaasime Andrea Ammon,
Sida ay sheegayaan Khubarada Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO casharka ugu muhiimsan ee laga baran karo Bariga Asia ay ugu muhiimsan tahay "ogaanshaha, go'doominta, baaritaanka and daryeelidda kiisaska iyo karantiilidda qof kasta oo qof cudurka haleelay xiriir la yeeshay,"
Shiinaha ayaa ahaa waddanki ugu horreeyey uu cudurka haleelay oo xog uruurinti ugu horreeyey billaabay
Dr Rohan oo ku takhasusay unugga faayraska oo ka tirsan University College London, ayaa taageeraya: "in qorshaha lagu darsadaa xogaha ka imanaya Asia, waana inaan u aragnaa qaabka ugu habboon ee cudurka loo xakameyn karo ay ka mid yihin baaritaanno iyo dabagal adag iyo karantiil."
"Haddan waxaan wax ka ogaannay heerka ka bogsashada cudurka, balse weli waxaan u baahannahy inaan wax ka barannno heerka xiriirka qofka cudurka qaba qof aan qabin ay yeelan karaa," ayuu yiri Barafasor Alistair McGuir, oo madax ka ah dhaqaalaha caafimaadka ee waaxda siyaasadaha cafimaadka ee London School of Economics.
Casharka seddexaad ee laga baran karana wuxuu yahay faayraska sida uu u dhaqmo marka xayiraadaha la khafiifiyo: "Ha noqon mid aad u niyad jaba" ayuu yiri Barafasoor McGuire oo ka hadlayo waaya aragnimada Asia.
Hal farriin oo fudud ayey ku celceliyaan khubarada caafimaad taasoo ah: "Arrinta ugu muhiimsan ee aan Asia cashar ahaan uga qadaneyno inuu yahay baaritaanka," ayuu yiri Dr Rohn.
"Sheybaarada dunida waxaa ka socday dadaallo geesinimo leh oo cudurka dawo looga raadinayo" ayuu yiri Dr Rohn
Hong Kong waxay sameysatay aalad ay dadka kula xiriirto
"Waan ognahay cudurkan inuu yahay cudur aad iyo aad loo kala qaado," ayuu yiri Barafasor McGuire.
Tan kale ee muhiimka waxay tahay adeegyada caafimaadka laftooda casharrada ay ka baranayaan waya aragnimadooda" ayey tiri Judit Vall oo ka tirsan jaamacadda de Barcelona qaybta dhaqaalaha.
"Daraasado lagu sameeyey Asia ayaa muujinaya xirfadlayaasha caafimaadka ee dhibaatooyinka cudurkan safmarka oo kale ka shaqeeya iney la kulmaa dhibaatooyin maskaxeed iyo isku buuq maskaxeed" ayey tiri.
"Haddii aan xog hore ku noqonnana waxay sheegeysaa cudurka SARS ee seddex sana ka hor dillaacay sanaddi 2000, 10% shaqaaalah caafimaadka ka shaqeynayey in lagu arkay astaamo ka mid ah iskubuuq."
Iyada oo ay shacabka dunidan ku nool uu cudurkan aad u cabsi geliyey, mowjadda labaad ee cudurka waxay hay'adda WHo ku sheegtay "inuu bilooyin uu ku faafi karo", haddii degdeg loo khafiifyo xayiraadaha.
"Arrinta ma aha oo keli ah waxa aan dalalka kale ka baraneyno, balse sida oo kale aan wax ka barannaa wixi horay noo soo maray," ayey tiri Dr Laia Maynou oo ka socota waaxda caafimaadka ee LSE. "Sida wixi Spanish ka dhacay Spain oo kale 1918, waaya aragnimada loo leeyahayna lala xiriiriya cudurka safmarka ee hadda jira."
"Arrinta ma aha oo keli ah waxa aan dalalka kale ka baraneyno, balse sida oo kale aan wax ka barannaa wixi horay noo soo maray,"
"1918, waxaa dunida dhan ka jiray mowjad, mowjad kale iisu sii dhiibeyso, iyada oo ay ku xiran tahay sida ay waddama u kala siyaasad adkaayeen," ayey ku dartay Dr Rohn.
"Qaababka ugu habboon ee casharka laga qaadanayo waxaa ka mid ah casharrada laga bartay cudurka SARS ee 2003 dillaacay," halka ay qaarna bilooyinki ugu dambeeyey wixi dhacay ay casharra ka barteen, ayey tiri Dr Ishikawa.
Hay'adda caafimaadka adduunkana waxay ka digtay saadaasha la sameynayo xilliga uu cudurkan uu dabar go'i karo.
"Ilaa laga helo dawo si sax ah u shaqeyso nala heli karo, dhammaanteen halis ayaan ku soo jireynaa."
Warka farxadda leh ayaa wuxuu yahay "Dhammaanteen hal doon ayaan wada saarannahay. Dunida oo dhanna hal waddo ayey ku soo wada dhacday waxaanna rajeeynayaa Saayniska inuu dinida dhibaatada uu ka bixin doono," ayuu yiri Dr Rohn.
Qof looga shakisan yahay inuu qabay coronavirus oo ku dhintay Beledxaawo
"Waxaa horteyda ku geeriyooday saddex aan dhalay iyo afar aan awoowe u ahay"